U qoonso kumbiyuutarka qeerkaa - Hoyga Aqoonta
U qoonso kumbiyuutarka qeerkaa
Waxaa la qoray : [ 09-05-2013 ]
A salaamu Calaykum dhammaan aqoonyahannada Hoygan.
Sidaan ballanta u qaadayba waa sharraxii barnaamijkii
lagu qufulayey kumbiyuutarka adiga oo ka ilaalinaya carruurta,
asxaabta dhibta badan inay adeegsadaan kumbiyuutarka inta aad ka maqantahay.
haddaba horay aynu ka galno sharraxa oo aan u qaybiyey labo qaybood
sida loogu dejiyo (Shubo) kumbiyuutarka iyo sida loo isticmaalo.
Waxaan ilaahay ka rajayn inaan ka soo baxo howshan.
Marka aad barnaamijka la soo degto oo ahaa dabinkiisu kan.
Halkan kala soo dageeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey
labo goor riix oo sidan ha'u soo baxdo kuna xiji (Run)
Tanaa ku xigaysa ee riix (Next)
Haddaad jeceshahay intaad meel kale ku shubto barnaamijka oo aan ahay
waxaad riixi kartaa (Browse) haddii kale (Next) riix.
gal ayuu u samayn haddaadse gal cusub u rabto oo aad magacaabayso adigu riix (Browse) ama
haddaad diiddantahay inuu u sameeyo gal riix (Don't create a start menu folde) markaana (Next)
Khaanadda 1-aad waa aykoonka barnaamija ayuu miiska kuu saari.
Khaanadda 2-aad aykoon si degdega loo galo ayuu kuu samayn.
Khaanadda 3-aad marka kumbiyuutarku soo shidmayo ayuu la shidmayaa.
Intaba sidaa ku daa haddaadan dan kale ka lahayn oo riix (Next)
Shuruudaha oggolow oo riix (Agree)
Tani waa tan ugu muhimsan ee inaad iska jirto ah barnaamijyo badanna ay sidaa sameeyaan
dadka badankiisuna uma fiirsadaan oo muddo yar gudeheed wuxuu arki qofku kumbiyuutarka oo ka buuxsamay.
Tanaa sababta ee barnaamij walba marka aad la soo degayso aqoonyahan intan iska jir.
Marka hore waxay saarantay goobaabintu (Quick (recommended) oo waa la'isku khatalaaye adigu riix (Advanced)
Markaana saxda oo dhan ka fuji kana tir-tir markaana riix (Agree)
Sidan oo kale ka dhig
Hadda oggolow oo riix (Agree)
Finish riix si'uu u shidmo barnaamijku adiga oo aan saxda ka qaadin.
Markaba wuxuu kaaga muuqan saacadda agteeda ee soo fur
Shaashadda guudi waa sidan
Khaanadaha (MOUSE LOCKS) aynu sharraxno
(LOCK LEFT MOUSE BUTTON) waxaad joojin in marka kumbiyuutarka lashido jiirka farta bidix la riixo.
(LOCK MIDDLE MOUSE BUTTON) farta dhexe lama adeegsan karo waa jiirarka leh badhan 3-aad iwm.
(LOCK RIGHT MOUSE BUTTON) Farta midig lama adeegsan karo
(LOCK DOUBLE CLICK) Jiirka 2 goor ma la riixi karo. (rigth click haddaad joojisay uma baahna tani)
(LOCK MOUSE WHEEL) jooji xataa garaangirta
(HIDE MOUSE POINTER) Qari jiirka bidhaantiisa bilig-bilig leh yaan la'arkinba jiirka
Khaanadda (KEYBOARD LOCKS) Joojinta looxa fure.
Ikhtiyaarro ayuu leeyahay kuu soo baxaya marka garaangirtaas aad dhaqaajiso marna midigta marna bidixda
oo aad kala dooran karto balse sida ay hadda tahay ku daa!.
(PASSWORD) Tiroda sirta ah waa inaad labo isu eg gelisaa sida (Hoyga aqoonta ) ay ii tahay anig.
(SHOW BALLOON WINDOW WITH PASSWORD REMINDER) ka fuji khaanadda 4 geeska ah ee saxdu saarantahay.
ikhtiyaarrada kor aynu ku sharraxnay markii aad ka doorato tii aad ka heshay
Markaad kumbiyuutarka galaysid si toos ah u qor tiroda sirta ah ee aad codsatay (Password)
markaasaad arkaysaa kumbiyuutarkii oo jiirkii soo saaray si lama filaana, markaana si caadi
ah u adeegso markii aad ka baxaysidna caadi baad uga bixi una demin wax kaa daba furi karana maleh
xataa kuwa haakarku waa ku waalanayaan mas'aladaha noocan ah mana isku mashquulinayaan inay
erayga sirta barnaamijkaas raadiyaan (Wakhti dhumis bay u arkayaan)
Waxaan rajayn inaad fahantay aqoonyahan barnaamijkan wixii aad ka fahmi weydo iimeel fays-book iyo golahaba
waad ku soo codsan kartaa si aqoontu u ahaato mid la wada qaatay. A Salaamu Calaykum Aqoonyahan.
Mowduucii hore : U qoonso kumbiyuutarka qeerkaa -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Afrikaan
Jawaabta: U qoonso kumbiyuutarka qeerkaa
sharax fiican barnaamij fiicn runtii waan ka faa iiday wuuna idhibay
Waxaa la qoray : [ 10-05-2013 ]
Aniga magacaan ka helay u qoonso kkkkkk. Waad ku mahadsantahay barnaamij heer sare ah iyo sharrax ka heer sarreeya
Waxaa la qoray : [ 11-05-2013 ]
waan kudhibaatoodiy sidan ugu dari lahay jawaab waxaan kahelay barnaamijka raacaya baraamijyada kudaga kumbiyuutarka maalin walba wan isweydin jiray maxaa keenay kan aqoon aad u fiican waanan idiinka mahad celin dhamaantiinba
aqoonyahan, arki, badankiisuna, buusamay, dadka, degayso, fahantay, fiirsadaan, goobaabintu, gudeheed, intaan, iska, jir, khatalaaye, muddo, qaatay, qofku, rajay, saarantahay, sababta, saxda, tanaa, uma, wuxuu, yar
Saacaddu hadda waa 08:13 PM.